Nghọta Demchọ Ọgbọ vs Ọgbọ Na-eduga | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa na-agbanwe okwu a na-achọ ọgbọ (chọọ gen) maka ọgbọ na-eduga (ndu gen), mana ha abụghị otu usoro. Ndị ụlọ ọrụ nwere ndị ahịa ahịa raara onwe ha nye nwere ike itinye atụmatụ abụọ ahụ n'otu oge. Ndị ụlọ ọrụ na-enwekarị inbound ahịa otu ịzaghachi choro emepụta arịrịọ ahịa na ndị na-ere ahịa n'èzí itinye aka na ndu ndị ahụ sitere na iduga emana emume.
Ọ bụrụ na enwere ike itinye ntughari na ntanetị na enweghị mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ, ọgbọ na-achọ dị oke mkpa iji mara mmata, ntụkwasị obi, na ikike na ngwaahịa na ọrụ gị. Ọ bụrụ ngbanwe gị chọrọ mmekọrịta mmekọrịta, mkparịta ụka, ma ọ bụ ogologo oge mgbatị ahịa, ọgbọ na-eduga dị oke mkpa iji nwaa ma nweta ọrịre ahịa ruru eru na-azụlite site na njedebe.
Kedu ihe bụ ọgbọ chọrọ
Ọchịchọ chọrọ na-akpali mmata na mmasị na ngwaahịa na ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ bụ ụgbọala mechie azụmahịa na mmekorita di ntakiri na ndi ahia ma obu ahia i na adọta.
N'ihe banyere ọgbọ na-achọ, ị nwere ike ịbụ onye na-eme ihe ike na ị na-atụ anya atụmanya site na usoro ahịa ma na-ebute ha ozugbo na ntughari.
Gịnị bụ Lead Generation
Ọgbọ ndị na-eduga mmasị ma ọ bụ nyocha n'ime ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ bụ nchịkọta njikọta ruru eru iji wulite mmekọrịta na ịzụlite ruo mgbe emechiri dị ka onye ahịa.
Mgbe ị na-ebugharị usoro eburu ụzọ, ị nwere ike ịbụ onye na-eme ihe ike na nchịkọta ozi kọntaktị ka ị wee nwee ike iwulite ntụkwasị obi ma soro atụmanya ahụ oge. N’ezie, ị chọghị igbochi ma ọ bụ belata nwayọ nke iduzi gị imechi gị. Idu isi dị oke egwu - ịghọta ma ndu ahụ ọ dị mma, nwee ego dịnụ, dị nso na mkpebi ịzụta. Ogologo ire ahịa ogologo oge, ntinye aka n'ọtụtụ, na azụmaahịa ụlọ ọrụ chọrọ usoro na usoro ndu ọgbọ.
Usoro a nwere ike iyi ezigbo ihe, usoro nwere ike ịdị nha n'etiti usoro abụọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, m ka nwere ike ịchụso ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na PR iji wuo mmata ma mee ka ịchọrọ ma ọ bụ ndu. Enwere m ike ịmepụta akwụkwọ ozi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na-enyere aka ịzụlite ndu ma ọ bụ gbaa mkpebi ịzụta. Ọ bụrụ na m na-anwa ịmepụta ndu, agbanyeghị, enwere m ike itinyekwu aka na nka ụlọ ọrụ yana otu ịtọlite ​​mmekọrịta n'etiti ogologo oge ga-adị oke mma.
Ihe ịga nke ọma ma ọ bụ mmesho nwere ike ịdị iche n'etiti atụmatụ abụọ a. N'ihi na chọrọ ọgbọ, Enwere m ike ilekwasị anya na iru ahịa m na nsụgharị ntụgharị. N'ihi na edu ọgbọ, Enwere m ike ilekwasị anya na ọnụọgụ ahịa ahịa ruru eru. Ọ bụ ezie na ndị ahịa ahịa nwere ike ịta ụta maka atụmatụ ọ bụla, ọ bụ ndị ahịa ahụ ka enwere ọrụ maka imechi azụmaahịa ya na atụmatụ ọgbọ ndu. Otu ahia ahụ bụ naanị maka ọnụọgụ na ogo nke ndu ndị enyere aka.
Tags: chọrọ ọgbọọgbọ chọrọ n’ọgbọ ọgbọina na nduinbound ahịaedu ọgbọkedu ndu ọgbogu lẹ mkpụkpuna-eduga na ọchịchọọpụpụ ahịa
Ezigbo isiokwu. Daalụ maka ịkọwa ọdịiche dị n'etiti abụọ!